Miyuu sameecadaha dhagaha ee 'Beats' qiimihiisu yahay in la iibsado iyo in kale? | Wararka IPhone
Garaac dhagaha dhagaha: miyay u qalmaan?
Luis del Barco | | Qalabka IPhone
Miyay mudan yihiin iyo in kale Dhagaha dhagaha ayaa u qalma? Dood caan ah oo meesha ka jirta taas oo siisay waxna siisay wax badan, gaar ahaan tan iyo markii Apple ay heshay shirkadda, wax xoojiyay muuqaalkeeda oo ah badeecad gaar ah iyo, in badan, ka badbadisay. Dadka kale, maahan wax badan. Yaa sabab u leh? Taasi waa waxa aan isku dayi doonno inaan ku faahfaahinno, guud ahaan khadadka, dhammaan qoraalka.
Maaddaama la isku raacsan yahay arrintan ay wax yar ka yar tahay utopia, waxaan isku dayeynaa inaan ku soo bandhigno xoogaa xog ah ujeeddo ka dib, mid walbana, dejiyo halbeeggooda. Waxaan ka bilaabaynaa aasaaska taas ku dhowaad dhammaan moodooyinka Beats looma jeedin dhagaystayaal xirfad leh maqal ah, laakiin loogu talagalay dadka aan u baahnayn inay aqoon ballaaran u leeyihiin mawduuca iyo, sida oo kale, ha u raadin dhammaystirnaanta xagga sare.
1 Waxaa garaacay Dr. Dre
2 Dhagaha dhagaha ugu fiican
3 Maxay yihiin noocyadan?
3.1 Kaliya 3 Wirelesss
4 Marka waxaan isku raacnay ...
Waxaa garaacay Dr. Dre
Beats had iyo jeer waxay leedahay qiime bulsho oo xoog leh astaan ​​ahaan, oo lagu dhisay sannado badan oo ballaadhin iyo shaqo suuq-geyn ah, naqshadaheeda si fiican loo aqoonsan karo iyo, maxaa diidaya, sidoo kale qiimaheeda. Qiimaha isla sameeyaa dad badan ayaan diyaar u ahayn inay bixiyaan waxa sameecadaha dhagaha la gasho markay suuqa aadaan ama ay sugaan inay ku helaan qiimo jaban bilo yar kadib, ama ma iibsadaan. Tani waxay ka dhigan tahay inay sidoo kale jiraan waxyaabo himilo gaar ah leh oo ah garaacista Beats - si la mid ah sida ay ugu dhacdo taleefannada casriga ah iyo alaabooyinka kale ee dhammaadka-sare leh - maadaama qof kastaa uu awood u leeyahay inuu aqoonsado qaar ka mid ah markuu ku arko iyaga waddada, kuna lamaaneeyo a fikradda hore loo aasaasay ee qiimaha. Ma khaldami doonno haddii aan dhahno in badan oo ka mid ah iibka Beats waxay ku saleysan yihiin muuqaalka daahir ah oo fudud, taas oo aan iyana xun.
Laakiin ma waxay u dhawaaqaan wanaag ama ma dhawaq xunbaa? Marka laga soo tago bilicsanaanta iyo astaantu waa in si fiican loogu hoggaansamo maxay tahay shaqada ugu weyn ee alaabooyinkan, taas oo aan ahayn wax aan ka ahayn inay na siiso tayada maqalka ee ku nool filashooyinka koofiyadaha qaarkood oo leh qiime ay tahay in qiil loo helo. Waxaa laga yaabaa inay tahay jawaabta ugu adag ee laga jawaabi karo, maaddaama aragtida shakhsiyeed ee mid kasta ay ka dhigeyso fikradda inay u janjeerto dhinac ama dhinaca kale.
Aynu caddeynno: midkoodna dhagaha iyo garaacadaha Beats midkoodna ma bixinayo codka liita ama dhexdhexaad ah Astaan ​​sumcad kuma kasbato samaynta alaabada 'caadiga ah' iyo, hubaal, Beats ma istaagi doono sida ay u tahay haddii tayada maqalka ee alaabteeda ay liidato. Halkaas, in isticmaale jecel yahay wax ka badan ama ka yar waa wax galaya goobta shaqsiyeed.
Haddii aan eegno dib-u-eegista iyo isbarbardhigga, natiijada lagu soo celiyo badankood in ay wanaagsan yihiin laakiin aan ahayn tan ugu fiican ee aan ku heli karno qiimahaas ama mid la mid ah, oo leh Sony, Plantronics ama Bose oo leh qeexitaano farsamo oo wanaagsan iyo tayo cod leh oo dembi ka yar qodobbada uu garaacayo Beats, sida isticmaalka badan ee baaska. Muxuu Beats leeyahay oo inta kale aysan lahayn, markaa?
Dhagaha dhagaha ugu fiican
Si sax ah, sanadkan waa markii aan heli karno farqi badan marka loo eego tartanka markaan iibsaneyno Beats. Dhowr bilood ka hor Apple waxay soo bandhigtay AirPods, kaas oo lagu dhex daray qashin W1 cusub si gaar ah loogu talagalay in lammaanaha iyo ku xirnaanta Bluetooth-ka ay ahayd mid aan waligeed lagu arag inta u dhexeysa aalad iyo taleefannada casriga ah. Waad ku mahadsan tahay isaga, weligeed si dhakhso ah umay bilaabin ku raaxeysiga muusigeenna qalabka wireless-ka, marka lagu daro bixinta horumar weyn oo ku saabsan ismaamulkooda iyadoo la sameynayo maarayn tamar wanaagsan.
Bilo ka dib, waxay ku sameysay si la mid ah laba moodal oo 'Beats' ah sidoo kale waxaa ku jiray jabkan iyaga ku jira, iyaga oo ka dhigaya xulasho wanaagsan sida AirPods ee kuwa raadinaya qaab kale. Tani wuxuu ka dhigayaa moodooyinka noocyada leh muuqaalkan hal talaabo hore shirkadaha kale iyo, shaki la'aan, waa sabab kaligeed kaligeed in loo doorto Beats halkii laga dooran lahaa Bose. Kaliya maahan inay ka raaxeysan tahay, ee waa in isticmaalka aan siin doonno ay tahay maalin kasta oo ay tahay inay jirto raaxo weyn oo noo oggolaaneysa inaan ugu raaxeysanno iyaga sida ugu buuxda sanadka 2017 iyo sannadaha soo socda.
Maxay yihiin noocyadan?
Ilaa hadda, waxaa jira laba shey oo Beats ah oo ay ku jiraan W1 chip gudaha dhexdooda, sidaas darteed, waxay u boodboodeen heerka xiga ee isku xirnaanta bilaa-waayirka, tallaabo aan dib-u-noqosho suurtagal ahi jirin. Jiritaanka kuwan, sidaan soo sheegnay, waxay ka jawaabaysaa baahida loo qabo in la daboolo baahiyaha aan ahayn kuwa AirPods.
Kaliya 3 Wirelesss
Sawirka: dib u eegisyo khibrad leh
Isbeddelkii ugu dambeeyay ee Solo caan ah. Waxay ilaalinayaan naqshad dhaqameedka iyo nooca ay caan ku tahay, iyada oo lagu darayo dhammaan waxyaabaha wanaagsan ee cusub. Hadaad raadineysay koofiyadaha madaxa Kuwani ma niyad jabaan, - marka laga reebo haddii aad haysatid iPhone 7 oo aad rabto inaad iyaga ku xirto iyada oo loo marayo fiilada ay ku jirto, taas oo ah jaakad 3,5 mm ah oo aan ahayn Hillaac, haddii ay dhacdo wax yar ayey kaa niyad jabi doonaan.
Guud ahaan, waan jeclaan doonaa waxa ay bixiyaan haddii aan go'aansano inaan iibsanno. Intaa waxaa dheer, dukaamada sida Amazon waxaa laga heli karaa qiimo hoose marka loo eego dukaanka rasmiga ah ee Apple.
Iibso - Garaacid Solo 3 Wireless
Xulashada ugufiican ee ciyaaraha fudud. Xorriyadda aan qaadi karin fiilooyinka, oo ay weheliso naqshad loogu talagalay in aan laga dhaqaaqin kanaalka dhegta, nooc kasta oo jimicsi ah oo aan sameyno, ayaa ku soo hagaagi doonta haddii aan ka helno dhageyso muusikadeena ama podcasts inta aan jimicsiga sameyneyno. Haddii ay dhacdo in AirPods aysan annaga noo ahayn maxaa yeelay si fiican uma habeeyaan qaabka dhegta oo si joogto ah ayey u dhacaan, laga yaabee inay tan tahay tan ugu xiisaha badan. Mar labaad, Amazon waxaan ka heli karnaa qiimo dhimis yar marka loo eego kuwa ay iibisay Apple.
Iibso - PowerBeats3
Marka waxaan isku raacnay ...
Marka la soo koobo, waxaan dhihi karnaa Beats headphones iyo sameecadaha dhagaha ayaa na siin doona a in ka badan adeeg qancin leh haddii maqalkayagu aanu aad u fiicnayn waxaanan dooneynaa inaan qadarinno dhammaan waxyaabaha isku dheelitiraya iswaafaqsan. Ma jiraan xulashooyin isku mid u shaqeyn doona ama nooga wanaagsanaan doona qiimo la mid ah ama ka hooseeya? Malaha haa. Laakiin, sidaan horay u sheegnay, qiimaha waa qeyb ka mid ah habka loo garaaco Beats, marka taasi waa dagaal lumis ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Garaac dhagaha dhagaha: miyay u qalmaan?
beatsx sidoo kale waxay leedahay jajab
Waad iska iloowday garaacista x taas oo xaqiiqdii ay tahay tan ugu xiisaha badan qiimaha
Ma jiraan wax la mid ah ka sarreeya Sennheiser!
Waxaan haystay dhagaha dhagaha dhowr jeer, seddexdooduba waxay noqdeen kuwo xun, ma ahan musiibo, mid ka mid ah ayaa madaxa iga xirtay, midda kale dhalaalkii wuu dhammaaday kuwa badhankana way joojiyeen shaqadooda, kuma bixin doono euro lacagta dhismahaas Waxaan kugula talinayaa waxba
Aircharge waxay ku dareysaa dacwad la socota lacag la'aanta wireless-ka ee iPhone ee BMW
$ 24.000 qiimahoodu yahay alaabada Apple Store ayaa la xaday